Ihe omuma ihe omuma | Martech Zone
Saturday, May 26, 2007 Sọnde, Septemba 8, 2013 Douglas Karr
Ihe kacha amasị m bụ oge m na-etolite, na-ese ihe. M ọbụna were a di na nwunye afọ nke drafting ọmụmụ mgbe na High School na hụrụ ya n'anya. Ọ nwere ike ịkọwa ihe kpatara m na-enwekarị isiokwu ma ọ bụ posts na eserese, onye na-ese ihe osise, ihe atụ na isiokwu ndị ọzọ.
Agbanyeghị na enweghị m ike mụta nwa ma ọ bụ mepụta atụmatụ dị ukwuu n'onwe m, ekwenyere m na enwere m ụtọ maka ya. M digress! Nke a bụ obere vidiyo dị jụụ na ndenye ederede… ọtụtụ ndị amaghị ọrụ niile na-abanye n'ime ụdị font yana otu ọrụ mkpụrụedemede nwere ike isi rụọ na izi ozi gị.
Otu ihe edetu: Nke a bụ nnukwu vidiyo maka ịkọwa njirimara niile nke font, mana enweghị m ezigbo mkpụrụ edemede ha ji na vidiyo. Chọrọ ịkọrọ gị ya! N'ụzọ dị otú a mgbe ịchọrọ ịkọwara onye mmebe gị na ịchọrọ karịa oghere dị n'etiti mkpụrụedemede, ị nwere ike ịsụ asụsụ ha wee sị, "Anyị enwere ike ịnwale ịbawanye ụba."
Fọdụ verbiage nke njirimara nke Typography:
Ogologo ahịrị - ole ederede ole dabara na ahịrị tupu ị laghachi na mbido.
-eduga - ohere n'etiti ntọala nke otu akara ederede na-esote.
Ilekọta anya - ebe dị anya n’etiti mkpụrụedemede n’okwu.
azuokokoosisi - akuku 'akuru akuku' nke edeputara ederede ozo.
Baseline - kehoraizin itinye n'ọnọdụ nke akwụkwọ ozi.
Crigo - akụkụ nke font nke na-arịgo elu karịa agwa.
Agbada - otu akụkụ nke font na-agbada karịa ntọala.
counter - oghere ọcha site na leta ozi.
Serif - imewe na njedebe ọ bụla nke agwa (sans serif pụtara na ọ nweghị atụmatụ)
x-elu - elu nke ụdị onye a na-ahụkarị (ewepu onye ọ bụla na-arịgo ma ọ bụ rịdata)
Ana m agbaghara ndị ọkachamara nọ n'ebe ahụ na-eme nke a maka ndụ. Naanị m chọrọ ịnye akara ngosi na akara edemede na nkezi Marketer. Enwere ike ịkpọ ndụmọdụ gị na ndozi gị na nkọwa m dị mfe.
Mee 27, 2007 na 2: 24 PM
Nkwalite dị mma maka ndị mbido. Nkọwa ị jirila '' tebụl '' nwere ike ịbụ ntakịrị ihe. Nkọwa kachasị dị mkpirikpi m nụrụ bụ? Oghere ọcha nke mkpụrụ akwụkwọ ozi gbara.?
Mee 27, 2007 na 2: 32 PM
Daalụ Kevin! Emelitere m nkọwa dị mkpirikpi site na nkwanye gị.
Mee 28, 2007 na 11: 35 AM
Ehee! Amaghị m nke ukwuu wee hazie a font. Enwere m mmasị na font ọhụrụ Microsoft na-eji na Office 2007. Ejiri m ya oge, wee laghachi na Office 2003 ma enweghị m ike iguzo ya!
Weebụ Bochum Weebụ
Jun 11, 2007 na 12:10 AM
Ee ekwenyere m na Thore, echere m na ọ dị mfe. Amaghị m na ọ bụ nnukwu ọrụ. Echere m na ọ bụ naanị otu n'ime ihe ndị ahụ anyị niile ji akpọrọ ihe. Daalụ maka ozi ahụ.
Oge ọzọ m wụnye font m ga-ejide n'aka iwepụta oge wee nwee ekele maka ọrụ batara n'ịme ya.